Mpanamboatra elanelam-bidy tsara indrindra | SICER
Raha ampitahaina amin'ny singa dewatering plastika, ny fonony vita amin'ny seramika dia suitalbe ho an'ny hafainganam-pandehan'ny milina taratasy rehetra. Noho ny fahombiazan'ny fitaovana manokana, ny fonosana seramika dia lava kokoa amin'ny androm-piainany. Miaraka amin'ny rafi-pitantanana sy rafitra tsy manam-paharoa izay efa novolavolaina, ny fonosana seramika anay dia voaporofo ho tatatra tsara kokoa, fananganana, fanatsarana, malama rehefa vita ny fampiharana.
Ny faran'ny mando an'ny milina efatra dia iray amin'ireo fepetra mamaritra ny fahombiazan'ny taratasy farany. Raha vao tratra eo an-tampon'ny lamba ilay ravin-taratasy, dia mifangaro sy mifamatotra ny fibre. Amin'izao fotoana izao dia natsangana ny fananana ara-batana amin'ilay ravina.
Raha ampitahaina amin'ny fitaovana plastika HDPE, ny tontonana famoahana ceramic dia manana fahombiazana bebe kokoa amin'ny tanjaka, fanoherana ny fikorontanan'ny hafanana, ny fitoniana, ny hamafiny, ny fanoherana ary ny havizanana ary tsy mora fanovana. Rehefa avy niova ho fonosana seramika dia mihatsara ny fahamendrehana, ny fisaka ary ny fisorohana ny latabatra tariby.
ny orinasanay dia manatsara hatrany ny kalitaon'ny vokatra hihaonana amin'ny filan'ny milina taratasy haingam-pandeha avo lenta ary mifantoka bebe kokoa amin'ny fiarovana, ny fahamendrehana, ny fepetra takiana amin'ny tontolo iainana ary ny fanavaozana ny Dewatering Element for Paper Mill, mitana andraikitra lehibe izahay amin'ny famatsiana mpanjifa amina entana avo lenta.
Miaraka amin'ny fanoherana tsara hitafy sy coefficient ambany amin'ny fiction, ny vokatray dia afaka manitatra ny androm-piainan'ny lamba hatramin'ny 125 andro. Ny vola lany rehetra dia voatahiry be.
Izahay dia nifikitra tamin'ny filozofia hoe "misarika ny mpanjifa amin'ny entana tsara indrindra sy serivisy tena tsara". Afaka manome famolavolana injeniera arakaraka ny karazana milina taratasy isan-karazany sy ny naotin-taratasy izahay mba hiantohana ny fihena tsy ampy amin'ny rano. Miarahaba ny mpanjifa, fikambanana ara-barotra ary namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izahay mba hifandray aminay sy hikatsaka fiaraha-miasa ho tombontsoan'ny tsirairay.
• Coefficient ambany fikororohana
• Firafitra miorina
• Matrix matanjaka amin'ny vera fibre / fibre carbon
• Mora soloina
• Taham-pirinty ambany amin'ny fifangaroana
• Bara azo ovaina
• Arovy tsara ny tariby miforona
• Androm-piainana maharitra
diso mikasika ny Fahasarotana
Fanoherana fikorontanana mafana
（g / cm3）
（Kg / mm2）
Sicer-A 3.81-3.84 360-400 4.0-5.0 1350-1450 7.0-8.0 18-20
Sicer-SubA 3.86-3.88 380-420 5.0-6.0 1450-1530 7.0-8.0 20-25
Sicer-AZ 5.65-5.75 900-1100 5.0-6.0 1400-1500 9.0-10.0 3-4
Sicer-ZROX 5.70-5.75 900-1100 8.0-9.0 1200 ～ 1250 9.0-10.0 1-2
Sicer-ASC 3.05-3.10 350-400 4.0-4.5 2000 ～ 2400 4.0-4.5 80--90
Sicer-SN 3.05-3.20 650-750 6.0-6.7 1650-1750 2.5-3.0 30--50
Elemen-drafitra Dewatering- AlOx
Ny oksida vita amin'ny aliminioma avo lenta amin'ny submiron 99% dia azo ampiharina amin'ny hafainganam-pandehan'ny milina miaraka amina fihenam-bidy tsara indrindra.
Max. Halavany ~ 9000mm
Aapetraka amin'ny: talbe tariby feno eo ambanin'ny 800m / min
Boaty fanosorana gravitation ambanin'ny 1200m / min
SICER-SN dewatering element dia nampiasa fitaovana matanjaka be ho toy ny fotony, rakotra keramika avo lenta an'ny resistnantant SiN. Ny toetrany tonga lafatra sy ny kalitaon'ny milina tsara dia niantoka ny fametrahana sy fanoloana azo antoka. Amin'ny fatorana tsy misy fangarony, tsy nisy lakilen'ny piano hita teo amin'ilay fonony.
Fitaovana Si3N4 kilasy ambony
Fahombiazana azo antoka maharitra
Natao ho an'ny: fonosana poakaty na fizarana fanaovan-gazety eo ambanin'ny 1500m / min
Elemen-drafitra Dewatering- ZA
Fiarovana tsaratsara kokoa ny fahatsapana ary hanalava ny androm-piainany
Coefficient ambany amin'ny friksi
Fahosana sy fanatsarana ny kalitaon'ny tany
Natao ho an'ny: press section ambanin'ny hafainganam-pandehan'ny milina 1000m / min
Atiny matrial: Al2O3 sy ZirO2
Ny tatatra mahomby
Mihena ny fanjifana angovo
Teo aloha: Cone mpanadio seramika
Manaraka: Nitrile Rubber Ceramic Model